Tsy afa-nihazo an’i Mahajanga… : nilatsaka ny didy jadona, navoaka tao anaty fiaramanidina Rajoelina | NewsMada
Efa teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato saingy, tsy tafainga. “Nanao ny ezaka rehetra aho hihaonana amintsika vahoakan’i Mahajanga, saingy tsy misy ny fahalalana sy ny fahafahan’ny olom-pirenena mivezivezy. Misy ny jadona ka tsy navela handeha fiaramanidina manokana izahay sy ny vady aman-janako. Nikasa handeha fiaramanidina Air Madagascar koa avy eo ary efa vonona hiainga saingy nilatsaka ny baikon’ny filoha Rajaonarimampianina sy ny governemanta tsy namela anay hiainga ary navoaka tao anaty fiaramanidina”, hoy ny filohan’ny Tetezamita, Rajoelina Andry, niditra an-telefaonina mivantana tamin’ireo vahoaka marobe teny amin’ny seranam-piaramanidina Amborovy Mahajanga, omaly hariva.
Nohitsiny tamin’izany fa voasakantsakana tanteraka ny tenany ary tsy navela hihaona amin’ny vahoakan’i Mahajanga. Na izany aza, nampanantena ny tenany fa tsy maintsy mbola hisy ny fotoana handehanany aty Mahajanga. “Miandry ny toromarika isika… Aoka ho tony“, hoy izy. Anton-dian’ny filohan’ny Tetezamita ny fanasan’ny ben’ny Tanàna sy ny kaominin’i Mahajanga azy amin’ny fitokanana ampahan-dalana roa ary koa hanolotra fanomezana sy fanampiana ho an’ny mponina. Tsy tanteraka anefa izany noho izao antsojain’ny fitondrana HVM izao. Anisan’ireo tompon’antoka amin’izao fanakanana izao ny eo anivon’ny ACM sy ny minisiteran’ny Fitaterana noho ny korontana ambaran’izy ireo fa mety hiseho ao Amborovy. Tsy nisy naoty anefa izany fa am-bava fotsiny ihany.
Na teo aza ny fahadisoam-panantenan’ireo vahoakan’i Mahajanga, nirava am-pilaminana naneho ny alahelony amin’izao fihetsiky ny fitondrana izao izy ireo. Efa nialohavan’ny lahatenin’ny depioten’i Mahajanga, Nina sy ny ben’ny Tanàna, Moukthar Salim, rahateo izany. “Mila tony isika ary hody am-pilaminana ary aoka ho mailo amin’ny mpanararaotra. Milamina sy hendry ny vahoakan’i Mahajanga… Misy farany avokoa ny zava-drehetra“, hoy izy ireo.